को हुन् सिके राउत? - नेपाल समय
को हुन् सिके राउत?
जनकपुरधाम - अलग मधेस देशको अभियान चलाउँदै आएका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक अखण्ड नेपालका पक्षमा उभिएका छन्। बिहीबार सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि रिहा भएका राउत अलग मधेस राष्ट्रको अभियान छोड्दै अखण्ड नेपालका पक्षमा आएका हुन्।
पछिल्लोपटक २१ असोजमा रौतहटको गौरबाट पक्राउ परेका उनी हिरासतबाहिर आउन सकेका थिएनन्। देश टुक्र्याउने अभियानमा जुटेका राउतको गतिविधिलाई गृह मन्त्रालयले निगरानीमा राखेको थियो।
सप्तरीको महदेवा गाउँमा जन्मेका चन्द्रकान्त राउत (सिके राउत) अमेरिकास्थित नासामा कम्युटर वैज्ञानिकका रूपमा कार्यरत थिए। उनी सन् २०११ को अन्त्यतिर नेपाल फर्किएका हुन्।
युवा इन्जिनियर पुरस्कार, महेन्द्र विद्याभूषण, कुलरत्न गोल्डमेडल, ट्रफिमेनकफ एकाडेमिक एचिभमेन्ट अवार्डजस्ता सम्मानबाट उनी विभूषित भइसकेका छन्। लन्डनको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका राउतले गाउँकै विद्यालयबाट प्राथमिक तह र छिमेकी गाउँ कट्टीबाट माध्यमिक तहको शिक्षा प्राप्त गरेका थिए। विद्यालय तहको अध्ययन पूरा गरिसकेपछि राउतले नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जापानको टोकयो विश्वविद्यालय र लन्डनको क्याम्ब्रिजमा समेत अध्ययन गरेका छन्।
पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेका उनले एक इन्जिनियरिङ क्याम्पसम विभागीय प्रमुख बनेर काम गरेका थिए। तर आफूलाई नसोधी व्यवस्थापनले सहायक विभागीय प्रमुख बनाएपछि उनले राजीनामा दिएर हिँडेका थिए। त्यसपछि जापान सरकारले दिने मोनबुसो छात्रवृत्ति पाएर राउत जापानतर्फ लागे।
जापानबाट फर्किएपछि सन् २००४ को अगस्तमा घरबाट निस्केका राउतसँग कहाँ जाने भनेर कुनै योजना थिएन। भगवान् खोज्दै भन्दै भारतको कलकत्ता, मद्रास, कन्याकुमारी, मधुराई, बेंगलोर र रामेश्वरम् हुँदै साईबाबाको पुट्टुपर्तीस्थित प्रशान्ति निलमयसम्म पुगेको उनले आफ्नो आत्मकथा ‘बैरागदेखि बचाउसम्म’ मा उल्लेख गरेका छन्। त्यही क्रममा उनले पहिचानको ब्रह्मज्ञापन प्राप्त गरेको राउतको आत्मकथामा भनिएको छ।
भारतपछि पुनः नेपाल फर्केका उनी फेरि जापानतर्फ लागे। जापानमा पढाइको अन्त्यतर्फ उनी बिरामी भए। अस्पतालबाटै आफ्नो थेसिस लेखेका उनलाई थेसिसबारे आफ्नो कुरा राख्न एक जापानी साथीले अस्पतालबाट विश्वविद्यालयसम्म ह्विल चियरमा पुर्‍याएका थिए।
जापानबाट स्नातकोत्तर गरिसकेपछि विद्यावारिधिका लागि राउतले बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा आवेदन दिए र छनोट पनि भए।
सप्तरीबाट पहिलोपटक इन्जिनियरिङ पढ्न काठमाडौं पुगेका बेला ऋतिक रोशन काण्ड भएको थियो। त्यस घटनामा भारतीय भन्दै कतिपय मधेसीउपर भएको कुटपिटको घटनालाई राउतले दमनका रूपमा लिएका थिए।
अमेरिका बसाइका क्रममा राउतले मधेसी हकहितका लागि भन्दै गैरआवासीय मधेसी संघ स्थापना गरी अध्यक्ष बने। सन् २००६ को अगस्तमा सप्तरी फर्कंदा मधेस आन्दोलन सुरु भएको थियो। मधेसमा आन्दोलन चलिरहे पनि स्वतन्त्र मधेसको विकल्प नरहेको भन्दै राउतसहितको समूहले ‘मधेस अधिकार एवं स्वतन्त्रता गठबन्धन’ स्थापना गरे। गठबन्धनको मूल नारा नेपाली उपनिवेश र रंगभेदको अन्त्य मधेसीको समुचित अधिकार र मधेसको स्वतन्त्रताको प्राप्ति र गणतान्त्रिक मधेसको स्थापना थियो। गठबन्धनको आफ्नै झन्डा बनाएका राउतले मधेसको छुट्टै राष्ट्रगानसमेत तयार पारेका थिए।
इन्टरनेट÷अर्पानेट र इमेल सिस्टम विकास गरेको संस्थाको रुपमा प्रख्यात बिबिएनमा वैज्ञानिकका रूपमा काम गर्न सन् २००९ मा राउत अमेरिका गए। त्यहाँ पुगेर मधेसीको संगठन बनाउने योजना उनले कार्यान्वयन गरे। कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढेका र ह्याकिङ जानेका उनले स्पाइडर प्रोग्राम तयार पारी नेपालसँग सम्बन्धित वेबसाइटका लक्षित समूहका लाखौं इमेल संकलन गर्दै नियमित रुपमा आन्दोलनको वस्तुस्थिति र लेख पठाउँथे।
अमेरिकाबाट मेची–महाकाली यात्रा गर्न राउत नेपाल फर्के। गैरआवासीय मधेसी संघको ब्यानर राखेर उनीसहितको समूहले मेची–महाकाली यात्रा गर्‍यो। यात्राको अनुभवबारे राउतले आत्मकथामा, ‘पहाडीहरु आफ्नो उपनिवेश लाद्न बढी उग्र र संगठित छन्’ भनेका छन्। मेची महाकाली यात्रापछि राउतले मधेसलाई नेपालबाट छुट्याएर अलग्गै देश बनाउन अभियानमा जुटे।
समयक्रमसँगै राउत समर्थकको संख्या पनि बढ्दै गयो। यसअघि अधिकांश समय गृहजिल्ला सप्तरीबाटै राजनीतिक गतिविधि गर्दै आइरहेका राउत संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरमै डेरा लिएर बस्दै आइरहेका छन्। केही दिन जनकपुरस्थित माछाबजार नजिक बसेका राउत अहिले जनकपुर–८ मा डेरा लिएर बसेका छन्। सुरक्षा निकायको निगरानीमा रहेका राउतले आफू बस्ने डेरालाई सिसिटिभी क्यामरामा कैद गरेका छन्।